Sanganisa data rekambani yako mugore | Ehupfumi Zvemari
Sanganisa data rako rekambani mugore
Jose recio | | makambani
Maitiro matsva mukubatanidzwa kwedata chiito icho makambani mazhinji anga achiteedzera mumakore apfuura. Kuti uzadzise zvaunoda mu kuchengetedza data. Chiito icho dzimwe nguva chinombonetsa nekuda kwekuti iyo data inouya kubva kwakasiyana masosi uye mune dzakawanda zviitiko zvisingawirirane. Saka kuti nenzira iyi, iri muchinzvimbo chekuona ruzivo irwo rwechimwe chezvinhu izvo avo vanoitira mabhizinesi mitsara vanoedza kuchengetedza.
Mukati meichi chirevo chizere, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mhedzisiro huru yekuita sanganisira yako data rekambani mugore ndeyekuti nzira yakabatana inogoneswa kubva pakutanga. Izvi mukuita zvinoreva kuti hazvidi kuti uende kune akati wandei matekinoroji mapuratifomu panguva imwe chete. Kana zvisiri, pane kudaro, inogadzirwa kubva kune imwecheteyo rutsigiro kana chishandiso. Zvekuti maitiro aya anogona kudzorwa nenzira ine hungwaru uye yakaenzana inogona kubatsira mapato ari chikamu cheichi chiito.
Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti nguva dzese tigone kuziva izvo iyo akanakisa tech makambani kuisa mari. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti zvinogona kutipa iyo isinganzwisisike nzira pamusoro pematanho ayo vanamuzvinabhizimusi vanogona kushandisa kuchengeta yavo data nekuchengetedzeka uye kugona.
1 Sanganisa data rekambani
2 Makambani kwatinogona kuisa mari
Sanganisa data rekambani
Kuti uite chiito ichi, zvakakosha kuti vashandisi vafunge nezve mabhenefiti ayo ino ruzivo rwekubatanidza ruzivo rwunogona kutipa mu gore nharaunda. Semuenzaniso, muzviitiko zvinotevera zvatichafumura pazasi:
Kubwinya kukuru uye kuti panopera zuva zvichatibvumira kuchengetedza yakawanda nguva mukufambisa iyi yakakosha maitiro.
Mari dzinoponeswa kubva pakutanga nekushandisa imwechete sisitimu inosangana nezvinodiwa zvebhizinesi.
Iko kukwidziridzwa kwemaitiro emukati uye izvo zvisina kunangana zvinokonzeresa manejimendi zviwanikwa zvevanhu kuti zvive zvakaringana kupfuura kusvika zvino.
Iyi fomati inochinja-chinja uye kuti, pamusoro pezvimwe pfungwa, inoenderana nezvinodiwa zvinogona kutorwa nguva dzese uye izvo zvisingazogara zvakafanana.
Makambani kwatinogona kuisa mari
Imwe yemienzaniso yakajeka kujekesa izvi zvinodiwa ndeye inomiririrwa neDropbox. Mune ino kesi ibasa rekutambira re muchinjika-chikuva mafaera mugore uye yaishandiswa nekambani yeAmerica iyi. Pakati pezvakanyanya kukoshesa maficha inyaya yekuti mushure mezvose ibasa rinotendera vashandisi kuchengeta uye kuwiriranisa mafaira online uye pakati pemakomputa uye nekugovana mafaera. Nenzira yakapusa, kunyangwe kune vashandisi vasina ruzivo mukubata kwerudzi urwu rwezvishandiso zvetekinoroji.
Iyi manejimendi manejimendi sisitimu inovimbisa kuwana kwakaringana kune mhando ruzivo uye pasi pemhando dzese mafomati uye kurapwa. Sezvo nechishuwo pane chikamu chemakambani anoda kupa mhinduro kune izvo zviri kuramba zvichidikanwa uye zvinoda kuchengetedzeka kukuru kuendesa uye kuendesa.
Onedrive ndeimwe yedzimwe sarudzo dzine makambani panguva ino uye dzinoshanda pasi pemipimo yakafanana neiyo yapfuura modhi. Pano unogona kugovana mafaera, maforodha uye mapikicha nemamwe makambani kana vanhu vamwe. Ndidzo dikanwo yekuve nematambudziko nekutumira ruzivo urwu kuburikidza nezvimwe zvechinyakare kana zvakajairika nzira: yemukati ndangariro mukombuta kana maemail. Nekuti mabasa aya anogona kuitwa chete kuburikidza ne batanidza neemail, meseji, iMessage kana social network.
Imwe kambani yatinogona kuisa zviwanikwa zvedu iMicrosoft Office OneNote, sezvo ichitsigirwa neimwe yekambani dzesainzi dzakasimba kwazvo pasi rese. Sisitimu yayo yakati siyanei zvishoma kubva kune vamwe vese nekuti inofambisa zviito chaizvo zvemakambani. Semuenzaniso, kunyora kutora, kuunganidza ruzivo uyezve zviito zvakasiyana-siyana zvevashandisi.
Ichiri kune rimwe divi, zvakare inogonesa imwe nhevedzano yezviito zvakasarudzika zvine makambani: nyora manotsi ekuteerera, isa mavhidhiyo epamhepo uye pakupedzisira wedzera mafaira uye rumwe ruzivo rwakakosha kwazvo muhukama mukati memakambani. Iyo inokodzera kwazvo zviitiko, sedzidzo, uye izvo zvinobvumidza vadzidzisi nevashandi vezvidzidzo kuti vaite zvirongwa zvavo zvekuita. Nezvimwe zviito chaizvo sekusikwa kwe digital library zvemukati zvinoenderana nemamwe makambani kana vanhu vamwe.
Zvichida ndeimwe yeanonyanya kukurudzira mazano mumakore achangopfuura sezvo achisangana nekukwanisika uye kuwedzerwa kwezviwanikwa zvinopihwa. Mune ino kesi kuburikidza ne digitization yeruzivo yakazara zvakakwana sezvo ichibvuma dzakasiyana tsigiro yeruzivo. Senge mavhidhiyo, zvakarekodhwa, mafoto uye akasiyana siyana audiovisual zvinhu. Pakati pekukosha kwayo ndeyekuti inotsigira mashandiro akadaro, ichivhura mabhuku mazhinji emabhuku sekuda kunoita mushandisi uye kutovapa mazita ekusiyanisa.
Kuburikidza nemakambani ese kubatanidza data rekambani yako mugore. Kune vekupedzisira vashandisi kuve vakagadzirira ku unganidza, kuronga, uye kugovana zvinhu nevamwe, kazhinji kune ese kubva kumapurojekiti kuenda kumapurojekiti. Iko zviripo pakupera kwezuva kubata kana kugovana chero mhando yeruzivo, asi nekuchengetedzeka kukuru kana uchiita aya akakosha mashandiro. Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti zvinowanzoitika uye kuwanda kuti huwandu hwakanaka hwevashandisi vazive kukosha kwekuchengetedza mafaera uye data rakakosha munzvimbo dzakasiyana siyana. Nekwaniso yekuona chokwadi chekuti tinogara tiine kopi yedata iyi uye ndoimwe yekutya kukuru kune vanhu ava.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Sanganisa data rako rekambani mugore
Iyo pasi yeIbex 35 yakavimbika pamatanho mazana matanhatu negumi?
Maitiro ekugadzirisa mashandiro ekutengesa pamusika wemusika?